बर्षा र माला भन्छन्, ‘हामीबिच झगडा परेकै छैन्’ « Ramailo छ
बर्षा र माला भन्छन्, ‘हामीबिच झगडा परेकै छैन्’
समय : 12:53 pm
नायिका बर्षा सिवाकोटी र माला लिम्बुले फिल्म ‘पुरानो बुलेट’मा पहिलो पटक एक साथ काम गर्ने मौका पाए । पहिलो फिल्ममै यी दुई नायिकाको सेटमा झगडा परेको चर्चा भयो । तर यस कुराको बर्षा र माला दुवैले खण्डन गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
‘पुरानो बुलेट’ छायाँकनमा झगडा परेको खबर सुनेका बर्षा र माला फिल्म रिलिजको मुखमा भने मिडियामा मिलेर फिल्मको प्रचार गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘काम गर्दा सानोतिनो मनमुटाव त परि हाल्छ नि ! तर झगडै परेको चाहिं होइन् ।’
भिषण राईले निर्देशन गरेको फिल्म ‘पुरानो बुलेट’मा नायक अनुप विक्रम शाही सोलो नायकको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । चैत १ गतेदेखि प्रदर्शन हुने फिल्म पुरानो बुलेटका मुख्य दुई हिरोइन बर्षा र मालाको ६ रमाइला तस्बिर हेर्नुस् :
नीताको हातमा किस गर्दै आमेशले बिहेको प्रस्ताव राखे !
फुटसल ग्राउण्डमा ‘कुम्भ करण’को प्रचार
सुटिङ्ग सेटमा पूजा र सलोनको ६ रमाईला पोज
उल्सन र सन्ध्याको ‘तरकारी’ हेर्नुस् (भिडियो)
पल र बर्षा गर्दैछन् घर बसाउने कुरा (भिडियो)